SIPHILA kwihlabathi elineenkonzo ezininzi ezahlukahlukeneyo. Olunye uhlolisiso lwakutshanje lwathi kukho iinkonzo eziphambili ezili-19 nezinye ezincinane ezili-10 000 ehlabathini. Le nyambalala yeenkonzo yenza abantu bakwazi ukukhetha abayifunayo. Ngoko ke, ngaba ibalulekile into yokuba uhamba yiphi inkonzo?
Abanye abantu bathi ezi nkonzo ziindlela nje ezahlukeneyo eziya ndaweni nye. Kubo, ayibalulekanga into yokuba yiyiphi indlela abahamba ngayo, ekubeni besithi zonke ziya ndawonye. Bathi mnye kuphela uThixo uSomandla, ngenxa yoko zonke iinkonzo zinqula yena.
Ngaba Zonke Iinkonzo Zinqula UThixo Omnye?
UYesu Kristu, omnye wabona bafundisi bonqulo bahlonelwayo wathini yena ngalo mba? Nantsi into awayixelela abafundi bakhe: “Ngenani ngesango elimxinwa.” Kuba kutheni? Kaloku wathi: “Ngokuba libanzi isango, iphangalele nendlela esa entshabalalweni; baninzi ke abangena ngalo. Ngokuba limxinwa isango, icuthene nendlela, esa ebomini; bambalwa ke abalifumanayo.”—Mateyu 7:13, 14, IBhayibhile YesiXhosa.
Ngaba uYesu wayesithi ezinye iinkonzo zikhokelela “kwintshabalalo”? Okanye ngaba wayesithi ngabahedeni kuphela abahamba kwindlela ephangaleleyo, ngoxa wona amakholwa, enoba ngawayiphi na imvaba, ehamba kwindlela emxinwa esa kubomi obungunaphakade?
Emva kokuba ethe zimbini kuphela indlela ekuhanjwa ngazo uYesu wathi: “Balumkeleni abashumayeli abaxokayo, abo beza kuni bezifanisa neegusha kanti ngaphakathi baziingcuka eziqwengayo.” (Mateyu 7:15, IBhayibhile YesiXhosa yowe-1996) Woleka umsundulo wathi: “Asingabo bonke abathi kum, Nkosi, Nkosi, abaya kungena ebukumkanini bamazulu; ngokwenzayo ukuthanda kukaBawo osemazulwini.” (Mateyu 7:21, IBhayibhile YesiXhosa) Ukuba umntu kuthiwa ngumshumayeli okanye uthi uYesu “yiNkosi” yakhe kusengqiqweni ukuthi uhamba inkonzo yaye akangomhedeni. Kucacile ukuba uYesu wayesilumkisa ngokuba azilunganga zonke iinkonzo yaye asifanele sithembe kwamntu kuba nje engumshumayeli.
Ngaba Ungakwazi Ukuyibona Le Ndlela Imxinwa?
IBhayibhile ifana nemaphu enokuthenjwa enokunceda umntu afumane inkonzo elungileyo
Ekubeni engayi kuThixo onke la mawaka eendlela, unokuyifumana njani le ndlela imxinwa esa kubomi obungunaphakade? Masikhe siyizekelise kanje le nto: Masithi ulahleke kwisixeko esikhulu, uze ke ucele uncedo ebantwini. Omnye ukuxelela kuba uye ngasempuma, yaye utsho eqinisekile. Kuvela omnye yena akukhombe ngasentshona. Kuthi kusenjalo kuvele omnye athi umele uhambe ngoyithandayo. Kuthi ke ekugqibeleni kuvele omnye umntu oya kwakwelo cala akubonise imaphu aze akukhombise nendlela ofanele uhambe ngayo. Ukunika lo maphu ukuba uhambe nayo ukuze umane ujonga kuyo njengoko uqhubeka nohambo. Ngaba loo nto ibengenakukwenza uqiniseke ukuba uza kufika nakanjani na apho uya khona?
Kunjalo ke naxa sikhetha inkonzo esifanele singene kuyo, kufuneka sibe nemaphu ethembekileyo yokusikhokela. Ngaba ikhona imaphu yokukhetha inkonzo? Ewe ikhona. Loo maphu yiBhayibhile yaye ithi: “Sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo nje, sikwancedela ukufundisa, ukohlwaya, ukululeka, ukuqeqesha okusebulungiseni.”—2 Timoti 3:16, IBhayibhile YesiXhosa.
Mhlawumbi nawe unayo iBhayibhile ngolwimi lwakho enokukukhokela njengemaphu yokukhetha inkonzo efanelekileyo. Abapapashi beli phephancwadi, amaNgqina kaYehova enza inguqulelo yeBhayibhile onokuyithemba, ebizwa ngokuba yiNguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele. Kodwa ke, ukuba awuloNgqina likaYehova usenokusebenzisa ezinye iinguqulelo xa uhlola inkonzo efanelekileyo nengafanelekanga. Yiloo nto ke, eyenze ukuba kula manqaku kusetyenziswe iinguqulelo zeBhayibhile ezahlukahlukeneyo ezihlonelwayo ziimvaba ngeemvaba.
Njengoko ufunda amanqaku alandelayo, sicela uthelekise izinto ozaziyo kunye nezo zithethwa yiBhayibhile. Khumbula amazwi kaYesu asibonisa indlela yokwahlula inkonzo elungileyo kwengalunganga. Wathi: “Wonke umthi olungileyo uvelisa iziqhamo ezihle, kodwa wona umthi ongalunganga uvelisa iziqhamo ezibi. Umthi olungileyo awunakuvelisa iziqhamo ezibi, nomthi ongalunganga awunakuvelisa iziqhamo ezihle.” (Mateyu 7:17, 18, IBhayibhile YesiXhosa Yowe-1996) Makhe sithethe ngeziqhamo ezithathu ethi iBhayibhile zaziza kuveliswa “ngumthi olungileyo.”